မြန်မာ - တရုတ်၊ တရုတ် - မြန်မာ စကားပြော (အတွဲ ၂)
ဝါဝါ (B.Econ. (O.R), Dip in Chinese U.F.L (Yangon))
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာဆန်းစစ်ချက် (၁၉၄၈ - ၁၉၈၈) (Case Study of Myanma Politics) (1948 - 1988)
ပါဠိ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန် (Pali - English - Myanmar Dictionary)
ဒေါက်တာအရှင်သြဘာသ (သာသနာတက္ကသီလ ဓမ္မာစရိယ) , B.A. (Buddhism) , Dip.(B.Dh.) , B.A (B.Dh.) M.A. (B.Dh.) , Ph.D
အခြေခံပညာမူလတန်း သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု မြန်မာ - ပိုးကရင် - အင်္ဂလိပ် ပုံပြအဘိဓာန်
အခြေခံပညာမူလတန်း သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု မြန်မာ - ချင်း (ဟားခါး) - အင်္ဂလိပ် ပုံပြအဘိဓာန်
အခြေခံပညာမူလတန်း သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု မြန်မာ - ဂျိန်းဖော - အင်္ဂလိပ် ပုံပြအဘိဓာန်
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်ဆက်ဆံရေး (၁၉၄၉ - ၂၀၂၁)
ရွှေအကြားအမြင် (၁၉၅၁ - ၁၉၉၄ မှ ၂၀၂၀)
Myanmar (1714 - 52)
Dr. Yi Yi
အောင်မှန် အခါပေး ဒိုင်ယာရီ (၂၀၂၂) (၁၃၈၃ - ၁၃၈၄)
ကိုရီးယား - မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်သော စိတ်ခွန်အားဖြည့် စာစုများ (2020.March. 27)
ချမ်းမြမြသော် (KHU, Seoul, Korea)
သင်နှင့် သင့်မိသားစု ကျန်းမာ၍ ချမ်းသာကြစေရန် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ရာသီဘေးကြောင့် တွေ့ကြုံလာနိုင်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသနည်းများ
ဆရာဦးဝင်းကို (နက္ခတ္တနယ (တဆ - ၂၉၁၆))
Category: ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ , ဗေဒင် / လက္ခဏာ / သမထ / ဂမ္ဘီရ / စိတ်ဝိဉာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် ပို့ချချက် (အတွဲ ၁) (ပထမအဆင့်)
အရှင်ပဏ္ဍိတ (ကထိက - န.ပ.သ)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် ပို့ချချက် (အတွဲ ၃) (တတိယအဆင့်)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် ပို့ချချက် (အတွဲ ၂) (ဒုတိယဆင့်)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မေးခွန်းဟောင်းနှင့် အဖြေမှန်များ
ပညာဘူမိ အဘိဓမ္မာ သင်္ဂဟ - ပို့ချချက် (ပထမဆင့်)
ပညာဘူမိ အဘိဓမ္မာ သင်္ဂဟ - ပို့ချချက် (ဒုတိယဆင့်)
ပညာဘူမိ အဘိဓမ္မာ သင်္ဂဟ - ပို့ချချက် (တတိယဆင့်)
အိမောင် (Fairy Web)
အရှင်ဇောတိ - နံ့သာနီ (Thailand)
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ မြတ်ဗုဒ္ဓပါဝစနအဘိဓာန် (A Pali Myanmar - English Dictionary of The Noble Words Of The Loard Buddha)
ဦးမြတ်ကျော် (မြန်မာစာအဖွဲ့) , ဦးစံလွင်
ဗေဒင်မေးပါ (နေ့စဉ် ကုန်စည်ဒိုင် ကုန်ဝယ် - ရောင်း ပြုလုပ်သူတိုင်း ဆောင်ထားရမည့် စာအုပ်)
ပြက္ခဒိန် (၂၀၂၂ ခုနှစ်) (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ - ၁၃၈၄) (၃ လနှုန်း) (အကြီး)
ပြက္ခဒိန် (၂၀၂၂ ခုနှစ်) (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ - ၁၃၈၄) (၁ လနှုန်း) (အကြီး)
ရတနာစိန် ထိုင်း - မြန်မာအဘိဓာန် (Yadanarsein Thai - Myanmar Dictionary)
မဟာဝိသုဒ္ဓါရာမိကထေရုပ္ပတ္တိဒီပနီ ပါဌ် - နိဿယ၊ ဝိသုဒ္ဓါရုံ ထေရုပ္ပတ္တိကထာ (ကျောက်စာ ( ပါဠိ မြန်မာ)၊ ကျမ်းစာရင်း၊ သိမ်စာရင်း၊ ထေရဘာသိတပကိဏ္ဏကဂါထာ၊ ဂေါဏမာတိကာ ဩဝါကထာ (၄ ကျမ်းတွဲ)
အရှင်သိရိဓမ္မ, သီဟိုဠ်၊ လယ်တီပဏ္ဍိတ , ဝိသုဒ္ဓါရုံ ဦးကောသလ္လ
ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး (Banking & International Trade)
ဦးစိုးတင် (လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး - ငြိမ်း) M.E.B
ပဋ္ဌာန်း (ဆဝါရဝိဘင်္ဂမှတ်စု) (ပဋ္ဌာနပါဠိ၊ ကုသလတ္တိက၊ ဆဝါရ အနုလုံ, ပစ္စနိတ်, ဝိဘင်္ဂဝါရ)
ဦးတင်ဝင်း (ဒိုက်ဦး - သုံးခွ)
ပဋ္ဌာန်း (ပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂ + ပစ္စယနိဒ္ဒေသ မှတ်စု) (ပဋ္ဌာနပါဠိ၊ ကုသလတ္တိက၊ ပစ္စယနိဒ္ဒေသ + ပဉှာဝါရ ပစ္စယာနုလောမ ဝိဘင်္ဂဝါရ)
ပဋ္ဌာန်း ကုသလတိက်မှတ်စု (ပဋ္ဌာနပါဠိ၊ ကုသလတ္တိ၊ ပုစ္ဆာဝါရ၊ ပဉှာဝါရ ဝိဘင်္ဂ + သင်္ချာ၊ ပစ္စနိဒ္ဒေသ၊ ဆဝါရဝိဘင်္ဂ + သင်္ချာ)
ကြယ်စင် ရာထူးဝင်ခွင့် (၂၀၂၁ - ၂၀၂၂) (Staff Entrance) (2021 - 2022)
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု
ဒေါက်တာဖြိုးမောင်မောင် (Dr. Phyo Maung)
A Pratical Pali Grammar
U Myint Swe (B.A.Honours, M.A.(London) (Founder and Rector of Buddhist University - Mandalay & Rangoon)
သက္ကတဘာသာအရ ဘာသာဗေဒနည်းဖြင့် ပါဠိဘာသာကို လေ့လာခြင်း (Philological Study of Pali Through Sanskrit)
ဦးမြင့်ဆွေ (မဟာဝိဇ္ဇာ - လန်ဒန်) (ကျောင်းအုပ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် - မန္တလေး)
နတ်မှီတောရဆရာတော် အရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့၏ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု (‘‘လူသေလူဖြစ်’’ ရှင်းတမ်း)
စိန်တလုံး (တင်စိန် - မီးရထား)
မောင်းထောင် မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကန္နီနည်း သမထ - ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျမ်း
ကျွန်ုပ်နှင့် အဘိုးပေါက်ပီ၏ ဘဝမှတ်တမ်း (အတွဲ ၁ + ၂) (စ - ဆုံး)
တိုးအောင် (ဆေး - မန်း)
နက္ခတ္တဗေဒပညာဆိုင်ရာ ခေတ်မီသိပ္ပံစံတော်ချိန် သံဒိဋ္ဌပြက္ခဒိန် ၁၃၈၄ ခု (၂၀၂၂ - ၂၀၂၃)
bitcoin လို - တို - ရှင်း
စုံစုံလင်လင် သင်္ချာသင် (Age3- 7)
၁၃၈၄ ခုနှစ်အတွက် ခိုင်မင်္ဂလာ သံဒိဋ္ဌနေ့စဉ်ဂြိုဟ်သွားပြက္ခဒိန် (သာသနာတော်နှစ် - ၂၅၆၆၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃)